Down syndrome ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ? – BurmeseHearts
Down syndrome ဆိုတာ သန္ဓေအောင်တုန်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ (ကလေးတသက်တာ ပါသွားမယ့်) မွေးရာပါ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ဆက်စပ်လို့ သန္ဓေအောင်သွားချိန်မှာ ပါဝင်ရမယ့် နှစ်ခုဖြစ်တည်မှုမှာ သုံးခုဖြစ်တည်သွားတဲ့အတွက် Down syndrome ရောဂါဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ အကြမ်းဖြင်းမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီပိုလာတဲ့ တစ်ခုဟာ ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ဆင့်ကို ကလေးတသက်တာ အနှောင့်အယှက် ပေးသွားတာပါ။
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၈)ပတ်နဲ့ (၁၁)ပတ်အတွင်းက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ?
BurmeseHearts	 Jun 4, 2015 3